Zdravko Logarušic Archives - Zimbabwe Voice
zimbabwevoice_1August 23, 2021
Senegal warned against underrating Warriors
FORMER Senegal defender Ferdinand Coly has warned his country against underrating Zimbabwe ahead of the 2022 Africa Cup of Nations (Afcon) finals next year. Senegal were pooled with Zimbabwe, Guinea and Malawi in Group B for next year’s finals that will be held in Cameroon. Many have tipped the Lions of Teranga to cruise through in Group B. Another former…
zimbabwevoice_1July 12, 2021
Winless Warriors booted out of COSAFA Cup
THE Warriors hit a new low under Zdravko Logarusic when their six-year unbeaten record at COSAFA Cup went up in smoke at the hands of Namibia yesterday at the Nelson Mandela Bay. Zimbabwe, who are winless after playing three games at this year’s edition of the competition, are now staring a possible exit as they have totally surrendered control of…
zimbabwevoice_1July 5, 2021
Warriors coaches Logarusic, Chitembwe barred from entering SA for COSAFA
WARRIORS coaches have been left back home as the country’s national football team is preparing for a grueling fight in the COSAFA Cup. Zimbabwe Football Association (ZIFA) spokesperson, Xolisani Gwesela, told VOA Studio 7 coach Zdravko Logarusic, and his assistant, Llyod Chitembwe, did not travel with the squad as they did not have South African visas. Gwesela said Chitembwe has…